Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UNkulunkulu ukunika ukuphila; yisipho osithola Kuye.
Ngakho kuwumsebenzi wakho ukufakaza Ngaye.
UNkulunkulu ukunika inkazimulo Yakhe, impilo Yakhe ama-Israyeli angabanga nayo.
Ngakho futhi kufanele unikele impilo nobusha bakho Kuye.
Unenkazimulo kaNkulunkulu, ngakho kufanele ufakazele uNkulunkulu. Kumisiwe.
Kuyinhlanhla yakho ukunikwa inkazimulo kaNkulunkulu.
Ngakho kuwumsebenzi wakho ukufakaza ngenkazimulo Yakhe.
Uma ukholwa kuNkulunkulu ukuze uthole izibusiso kuphela,
umsebenzi Wakhe ngeke ube nomqondo, futhi ngeke ugcwalise isibopho sakho.
Unenkazimulo kaNkulunkulu, ngakho kufanele ufakazele uNkulunkulu. Kumisiwe
Okulandelayo：Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu